Usoro iji kwalite mmụta: Kedu nke dị irè? Nkebi nke 2 | Ọzụzụ nghọta
Dị ka aha isiokwu ahụ na -egosi, anyị etinyelarị onwe anyị na isiokwu a, ha abụọ na -ekwu maka ya usoro dị irè, ha abụọ na -ekwu maka ya neuromites na usoro adịghị arụ ọrụ. Anyị abanyekwala n'ime nhazi iji mee ka mmụta dịrị n'ihu ọnụnọ ụfọdụ (dịka ọmụmaatụ, dyslexia e mpe mpe nchekwa ebe ọrụ).
More na nkọwa, na -ekwu maka otu review site na Dunlosky na ndị ọrụ ibe ya, anyị ekepụtala a ndepụta nke usoro 10 gafee nyocha nke sayensị, ụfọdụ na -arụ ọrụ nke ọma ma ndị ọzọ anaghị aba ezigbo uru, na -akọwa ike na adịghị ike ha.
Taa, anyị chọrọ imelite okwu a bidoro na anyị ga -enyocha Usoro 6; ụfọdụ n'ime ha ka a ga -emegharị ma e jiri ya tụnyere isiokwu gara aga, ndị ọzọ anyị ga -ahụ na nke mbụ ya. Usoro ndị a niile, dị ka nyocha akwụkwọ nke Weinstein na ndị ọrụ ibe anyị ga -atụkwasị obi, ha nwere otu ihe jikọrọ: ha niile na -arụ ọrụ nke ọma.
Kedu usoro ndị a?
1) Omume kesara
Na cosa iso
Ọ bụ ajụjụ na -eyigharị usoro ọmụmụ yana, karịa ihe niile, ịtụle kama itinye ha n'otu nnọkọ (ma ọ bụ nnọkọ ole na ole). Ihe achọpụtala bụ na, maka otu oge etinyegoro na nyocha, ndị na -eme ihe omume ndị a n'ogologo oge na -amụta ihe ngwa ngwa, ozi a na -adịgidekwa na ebe nchekwa.
Ihe atụ nke otu esi etinye ya n'ọrụ
Ọ nwere ike ịba uru ịmepụta oge raara nye ịtụle isiokwu ndị ahụ n'izu ma ọ bụ ọnwa gara aga. Agbanyeghị, nke a nwere ike iyi ihe siri ike n'ihi obere oge dịnụ, yana mkpa ikpuchi usoro ọmụmụ niile; agbanyeghị, enwere ike nweta oghere nke oge nyocha na -enweghị nnukwu nsogbu maka ndị nkuzi ma ọ bụrụ na ndị nkuzi were nkeji ole na ole na klaasị nyochaa ozi sitere na nkuzi gara aga.
Usoro ọzọ nwere ike ịgụnye ikenye ụmụ akwụkwọ ibu nke ịhazi onwe ha maka nyocha ekesara n'oge. N'ezie, nke a ga-akacha mma maka ụmụ akwụkwọ nọ n'ọkwa dị elu (dịka ọmụmaatụ, ụlọ akwụkwọ sekọndrị). Ebe ọ bụ na oghere dị mkpa chọrọ nhazi oge, agbanyeghị, ọ dị oke mkpa na onye nkuzi nyere ụmụ akwụkwọ aka ịhazi ọmụmụ ihe ha. Dịka ọmụmaatụ, ndị nkuzi nwere ike tụọ aro ka ụmụ akwụkwọ hazie oge ọmụmụ ihe n'ụbọchị ndị ọzọ na nke a na -amụ otu isiokwu n'ime klaasị (dịka ọmụmaatụ, hazie oge nyocha na Tuesday na Tọzdee ma ọ bụrụ na -akụzi isiokwu n'ụlọ akwụkwọ. Mọnde na Wednesde) .
Ihe nkatọ nke mbụ gbasara ọgba aghara enwere ike ịdị n'etiti oghere nyocha na ịgbatị ọmụmụ ihe dị mfe; n'eziokwu, usoro a na -enyekarị na a na -eyigharị usoro nyocha ka oge na -aga. Ọ bụ ezie na amaworị mmetụta dị mma maka ịdị anya nke usoro nyocha, amabeghị mmetụta nke ọmụmụ a kwụsịrị.
Ihe nkatọ nke abụọ bụ na ụmụ akwụkwọ nwere ike ọ gaghị enwe ahụ iru ala na omume ekesa n'ihi na a na -ahụta ya dị ka ihe siri ike karịa nlebara anya n'otu usoro ọmụmụ. Nghọta a, n'ụzọ ụfọdụ, dabara na eziokwu ebe ọ bụ na, n'otu aka, ibugharịa nyocha n'oge na -eme ka iweghachite ozi siri ike yana, n'aka nke ọzọ, usoro ọmụmụ ihe siri ike na -arụ ọrụ (ọ na -eme ngwa ngwa), n'elu na ọnọdụ ebe ọmụmụ ihe a bu n'obi naanị ịgafe ule. Agbanyeghị, ekwesịrị ịtụle uru nke omume ekesa mgbe niile ebe ọ dị mkpa idobe ozi ogologo oge.
Akụkụ ndị ahụ ka ga -edo anya
Enweghi nyocha nke na-amụ nsonaazụ nke ịkesa ọmụmụ nke ozi dị iche iche ka oge na-aga, na-anwa ịghọta ma ihe ekwuru maka nyocha ogologo oge na-adịkwa na nke a.
Ewezuga uru bara uru nke omume ekesa, ekwesịrị ịghọta ya ma usoro ọzụzụ siri ike dịkwa mkpa ma ọ bụ ihe amamihe dị na ya.
Enwetụbeghị nkọwapụta ihe bụ oge kacha mma n'agbata usoro nyocha na mweghachi nke ozi ka e wee nwekwuo mmụta.
2) OMUMEECHICHE '
Usoro a gụnyere ịlụ ọgụ echiche dị iche iche ma ọ bụ ụdị nsogbu dị iche iche n'usoro, na -emegide ụzọ a na -esikarị edozi ụdị nsogbu ahụ n'otu nnọkọ ọmụmụ. A nwalere ya ọtụtụ oge site n'ịmụta mgbakọ na mwepụ na echiche physics.
A na -eche na uru nke usoro a dabere na ikwe ka ụmụ akwụkwọ nweta ikike ịhọrọ usoro ziri ezi maka idozi ụdị nsogbu dị iche iche karịa naanị ịmụ usoro ahụ n'onwe ya ọ bụghị mgbe itinye ya n'ọrụ.
N'ikwu eziokwu, omume 'etinyela' etinyerela nke ọma n'ụdị ọdịnaya mmụta ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ, na nka, o nyere ụmụ akwụkwọ ohere ịmụta nke ọma ịjikọ otu ọrụ na onye dere ya.
Ihe atụ nke otu esi etinye ya
Enwere ike itinye ya n'ọrụ n'ọtụtụ ụzọ. Ọmụmaatụ nwere ike ịbụ ịgwakọta nsogbu ndị metụtara ngụkọ olu nke ihe siri ike dị iche iche (kama ịme ọtụtụ mmega ahụ na -enwe otu ụdị siri ike).
Nnyocha ndị ahụ lekwasịrị anya na mgbatị ahụ nke na -ejikọ ọnụ, yabụ, ọ dị mkpa ịkpachara anya ka ị ghara ịgwakọta ọdịnaya dị iche na ibe ha (ọmụmụ gbasara nke a adịghị). Ebe ọ na -adịrị ụmụ akwụkwọ na -eto eto mfe ịgbaghari ụdị mgbanwe a na -adịghị mkpa (yana ikekwe na -arụpụtaghị ya) na mgbakwunye bara uru nke ozi nwere njikọ, ọ nwere ike ịka mma maka ndị nkuzi ụmụ akwụkwọ na -eto eto ịmepụta ohere maka 'omume etinyere'. ' ajụjụ.
Ịlaghachi na isiokwu gara aga ugboro ugboro n'oge ọkara agụmakwụkwọ na -akwụsị ịmụ ozi ọhụrụ? Kedu ka ozi ochie na nke ọhụrụ nwere ike isi gbanwee? Kedu ka esi ekpebi itule n'etiti ozi ochie na nke ọhụrụ?
3) Omume nke mgbake / nkwenye
Ọ bụ otu n'ime usoro kachasị dị irè yana dịkwa mfe itinye. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọ bụ ajụjụ icheta ihe amụrụla, site na nyocha nke onwe yana site na ndenye ego. Omume nke icheta ozi sitere na ebe nchekwa na -enyere aka ijikọ ozi. Omume a na -arụ ọrụ ọbụlagodi na echetara ozi ahụ n'ekwughị okwu. A nwalekwara ịdị irè ya site n'iji nsonaazụ ya atụnyere ụmụ akwụkwọ ndị, kama icheta ozi sitere na ebe nchekwa ha, gara gụgharịa ozi a mụrụ na mbụ (omume iweghachite ebe nchekwa gosipụtara na ọ dị elu na nsonaazụ!).
Ụzọ dị mfe iji tinye akwụkwọ nwere ike ịbụ ịkpọ ụmụ akwụkwọ ka ha dee ihe niile ha chetara gbasara otu isiokwu amụpụtara.
Ụzọ ọzọ dị mfe bụ ịnye ụmụ akwụkwọ ajụjụ ajụjụ iji zaa mgbe ha mụsịrị ihe (ma na -aga n'ihu ma na ngwụcha usoro ọmụmụ) ma ọ bụ nye ndụmọdụ ka ha cheta ozi ma ọ bụ jụọ ha ka ha mepụta maapụ echiche na isiokwu ahụ. ozi ha na -echeta.
Ịdị irè nke usoro a daberekwa na ụfọdụ ihe ịga nke ọma n'ịgbalị weghachite ozi na ebe nchekwa yana, n'otu oge ahụ, ọrụ ahụ agaghị adịkwa nfe iji hụ na enwere ihe ịga nke ọma a. Ọ bụrụ, dịka ọmụmaatụ, nwa akwụkwọ kpuchie ozi ahụ ozugbo ọ gụchara ya wee megharịa ya, ọ bụghị ncheta site na ebe nchekwa ogologo oge kama ọ bụ ndozi dị mfe na ebe nchekwa ọrụ. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ihe ịga nke ọma dị oke ala, ọ gaghị ele anya na omume a ga -aba uru.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị nwere maapụ echiche echepụtara iji mee ka ncheta dị jụụ, ọ dị mkpa na nke a na -eme site n'obi n'ihi na imepụta maapụ site na ilele ihe ọmụmụ egosila na ọ dịchaghị irè n'ịchikota ozi.
N'ikpeazụ, ọ dị mkpa iburu n'uche nchegbu nke iji ule nwere ike ịkpata; n'eziokwu emere ka ọ pụta ìhè na nchekasị nwere ike belata uru ebe nchekwa nke teknụzụ a (enweghị ike iwepu ihe niile na -akpata nchekasị, agbanyeghị, ezigbo nkwekọrịta nwere ike ịbụ ịjụ ajụjụ nwa akwụkwọ nwere ike ịza).
Ọ ka ga -akọwapụta ihe kacha sie ike nke ajụjụ ule bụ.
4) Nhazi (na -ahazi ajụjụ)
Usoro a gụnyere ijikọ ozi ọhụrụ na ihe ọmụma dịbu adị. Enwere ọtụtụ nkọwa maka ịrụ ọrụ ya; mgbe ụfọdụ anyị na -ekwu maka mmụta miri emi, oge ọzọ ịhazigharị ozi na ebe nchekwa.
Na nkenke, ọ gụnyere iso onye a na -amụrụ ihe na -emekọrịta ihe site n'ịjụ ajụjụ gbasara isiokwu a mụrụ, na ebumnuche nke iduga ya ịkọwa njikọ ezi uche dị n'etiti ozi a mụtara.
Ihe a niile, na mgbakwunye na -akwado iburu n'uche nke echiche, gụnyere mmụba nke ike ịgbatị ihe amụtara na ọnọdụ ndị ọzọ.
Usoro mbu nke itinye n'ọrụ nwere ike ịbụ naanị ịkpọ nwa akwụkwọ ka ọ mikpuo nzuzo nke ozi a na -amụ site n'ịjụ ya ajụjụ dịka "kedu?" ma ọ bụ gịnị? "
Ihe ọzọ nwere ike ime bụ ka ụmụ akwụkwọ tinye usoro a n'onwe ha, dịka ọmụmaatụ, naanị site n'ikwupụta ụda ihe ha ga -eme iji dozie nha nha.
Mgbe ị na -eji usoro a, ọ dị mkpa ka ụmụ akwụkwọ jiri ihe ha ma ọ bụ onye nkuzi nyochaa azịza ha. mgbe ọdịnaya ewepụtara site na ajụjụ nhazi adịghị mma, nke a nwere ike ịka njọ mmụta.
Ọ ga -abara ndị na -eme nchọpụta ule ka ha nwalee ohere itinye usoro a ugbua na mbido ịgụ echiche ndị a ga -amụta.
A ga-ahụrịrị ma ụmụ akwụkwọ na-erite uru n'ajụjụ onwe ha ma ọ bụ na ọ ka mma ka onye ọzọ jụọ ajụjụ na-esochi (dịka ọmụmaatụ, onye nkuzi).
O dochaghị anya etu nwa akwụkwọ ga -esi nọgidesie ike na -achọ azịza ma ọ bụ ihe ezi nka na ihe ọmụma nwetara bụ iji nwee ike irite uru na teknụzụ a.
Obi abụọ ikpeazụ na -emetụta arụmọrụ: ijikwa usoro a chọrọ mmụba n'oge ọmụmụ ihe; ọ bara uru zuru oke ma ọ bụ ọ dabara adaba ịdabere na usoro ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ, omume nyocha (onwe)?
5) NTỤTARA NTỤTARA
Usoro a anaghị achọ mmeghe dị mkpa. Ọ bụ ajụjụ ijikọta ihe atụ ndị bara uru na nkọwa nkọwa.
A naghị ajụ ajụjụ ịdị mma yana dabere n'eziokwu na echiche adịghị ahụkebe siri ike nghọta karịa nke nkịtị.
Enweghị ọtụtụ ihe ị ga -aghọta gbasara usoro a; ọ bụghị ihe ijuanya, ndị dere nyocha anyị na -esite na ya nweta ozi a mata usoro a ka ọ kacha zoro aka n'akwụkwọ nkuzi ndị nkuzi (ya bụ n'ihe dịka 25% nke ikpe).
Agbanyeghị, ọ nwere ike inye aka ịmara na ime ka ụmụ akwụkwọ kọwaa nke ọma ihe atụ abụọ dị ka, na ịgba ha ume ka ha wepụta isi ihe dị n'okpuru n'onwe ha nwekwara ike inye aka n'ịkọwapụta nke ikpeazụ.
Ọzọkwa, inye ihe atụ ndị ọzọ nke otu ahụ na -abawanye uru nke usoro a.
Egosila na ịkọwa otu echiche na igosi ihe atụ na -adabaghị adaba na -achọ ịmụtakwu gbasara ihe atụ (ihe adịghị mma!) Ya mere, ọ dị mkpa ị attentiona ntị nke ọma n'ụdị ihe atụ a na -enye n'ihe metụtara ozi anyị chọrọ ka a mụta; ihe atụ ahụ ga -enwerịrị njikọ nke ọma na ọdịnaya dị na ya.
Ohere nke a ga -eji ihe atụ mee ihe n'ụzọ ziri ezi, ya bụ, iji wepụta ụkpụrụ nkịtị, metụtara ogo nke isiokwu nwa akwụkwọ. Ụmụ akwụkwọ nwere ahụmịhe ga -agbalịrị ịkwaga n'ụzọ dị mfe na echiche ndị bụ isi, ụmụ akwụkwọ nwere obere ahụmịhe ga -agbasikwu ike ịnọ n'elu.
A ka akọwapụtabeghị ọnụ ọgụgụ kacha mma nke ihe atụ iji kwado mkpokọta echiche ndị a ga -amụta.
Ọ bụghịkwa ihe doro anya ihe itule ziri ezi dị n'etiti ọkwa nke ịdị adị na ọkwa dị nkenke nke ihe atụ kwesịrị inwe (ọ bụrụ na ọ dịchaghị adị, ọ nwere ike sie ike nghọta; ọ bụrụ na ọ dị oke nkpa, ọ nwere ike ọ gaghị abụ ihe bara uru zuru oke ịkọwa echiche nke ịchọrọ ịkụziri).
6) CODE abụọ
Ugboro ole ka anyị nụrụla “foto bara uru otu puku okwu”? Nke a bụ echiche nke usoro a dabere na ya. Karịsịa, tụọ koodu abụọ na-egosi na ịnye ọtụtụ nnọchite anya nke otu ozi na-eme ka mmụta na ebe nchekwa dịkwuo mma, yana ozi nke na-akpalite ngwa ngwa karịa (site na usoro onyonyo akpaka) na-enweta ụdị uru ahụ.
Ọmụmaatụ kachasị mfe nwere ike ịbụ ịnye atụmatụ anya nke ozi a ga -amụta (dị ka nnọchite nke sel nke ederede kọwara). A pụkwara itinye usoro a n'ọrụ site n'ime ka onye mmụta ahụ see ihe ọ na -amụ.
Ebe a na -echetakarị ihe onyonyo karịa okwu, ọ dị mkpa ịhụ na onyonyo dị otu a enyere ụmụ akwụkwọ bara uru yana dabara na ọdịnaya a tụrụ anya ka ha mụta.
A ga -akpachapụ anya mgbe ị na -ahọrọ onyonyo n'akụkụ ederede n'ihi na nkọwa oke ihe nwere ike bụrụ ihe ndọpụ uche ma na -egbochi mmụta.
Ọ dị mkpa ka o doo anya na usoro a anaghị aga nke ọma na tiori nke “ụdị mmụta” (nke gosipụtara na ọ dị njọ); ọ bụghị ajụjụ ịhapụ nwa akwụkwọ ka ọ họrọ usoro mmụta kacha amasị (dịka ọmụmaatụ, anya o okwu ọnụ) mana ka ozi ahụ gafee ọtụtụ ọwa n'otu oge (dịka ọmụmaatụ, anya e okwu ọnụ, n'otu oge ahụ).
A ka ga -aghọta ọtụtụ ihe gbasara mmejuputa iwu maka itinye ọnụọgụ abụọ, a chọkwuru nyocha iji kọwaa otu ndị nkuzi nwere ike isi rite uru na uru nke ọtụtụ nnọchite anya na ịdị elu nke onyonyo.
Na gburugburu ụlọ akwụkwọ, anyị nwere ọtụtụ ohere iji usoro akọwara ugbu a na ijikọta ha na ibe ha. Dịka ọmụmaatụ, omume ekesa nwere ike ịkpa ike nke ukwuu n'ịmụ ihe mgbe ejikọtara ya na nnwale nke onwe (iweghachite na ebe nchekwa). Enwere ike nweta uru ndị ọzọ nke omume ekesa site na itinye aka na nyocha onwe onye ugboro ugboro, dịka ọmụmaatụ, iji nnwale mejupụta oghere dị n'etiti izu ike.
O doro anya na omume ịjikọ ọnụ gụnyere nkesa nyocha (omume ekesa) ma ọ bụrụ na ụmụ akwụkwọ agbanwere ihe ochie na nke ọhụrụ. Ọmụmaatụ dị nkọ nwere ike ịbụ nke okwu ọnụ na nke anya, si otu a na -emejupụta koodu abụọ. Tụkwasị na nke a, usoro nhazi, ihe atụ doro anya, na itinye koodu ugboro abụọ na-arụ ọrụ nke ọma ma ejiri ya mee ihe dị ka omume iweghachite (nnwale onwe).
Agbanyeghị, edobebeghị ya ma uru nke ijikọta atụmatụ mmụta a bụ mgbakwunye, ịba ụba ma ọ bụ, n'ọnọdụ ụfọdụ, ekwekọghị. Ya mere ọ dị mkpa na nyocha nke ọdịnihu ga -akọwapụta atụmatụ nke ọ bụla (ọkachasị dị mkpa maka nhazi na itinye koodu ugboro abụọ), chọpụta omume kacha mma maka itinye akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ, kọwaa ọnọdụ oke nke atụmatụ nke ọ bụla wee banye n'ime mmekọrịta dị n'etiti isii. Atụmatụ anyị tụlere ebe a. .
Meziwanye nchịkwa onwe onye nke mmụta site na iji otu nkuzi
Dyslexia: kedu usoro mmụta?
You nwere ike ịzụ ebe nchekwa gị?
Ọkwa agụmakwụkwọ na -emetụta IQ?
Ihe ịga nke ọma agụmakwụkwọ. Nchegbu, mkpali na nlebara anya: kedu ihe dị mkpa ime nke ọma n'ụlọ akwụkwọ?
Ihe mkpali kụrụ IQ 1 - 0!
Dunlosky, J., Rawson, KA, Marsh, EJ, Nathan, MJ, & Willingham, DT (2013). Kwalite mmụta mmụta ụmụ akwụkwọ nwere usoro mmụta dị mma: Nweta ntụzi aka sitere na mmuta na akparamaagwa mmụta. Science Sayensị na Mmasị Ọha, 14(1), 4-58.
Weinstein, Y., Madan, CR, & Sumeracki, MA (2018). Ịkụzi sayensị mmụta. Nnyocha nchọpụta: ụkpụrụ na ihe ọ pụtara, 3(1), 1-17.
mmụta, otu esi eme ka mmụta ka mma, usoro mmụta
Usoro iji kwalite mmụta: Kedu nke dị irè? Nkebi 22021-08-252021-08-25http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngỌzụzụ ọgụgụ isihttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2021/08/tecniche-per-migliorare-lapprendimento.-quali-sono-davvero-efficaci.jpg200px200px
Usoro iji kwalite mmụta: Kedu nke dị irè? Nkebi 1